Fewer U.S. Firms in China Profitable Even Before Virus Outbreak | Myanmar Business Today
Home Business International Fewer U.S. Firms in China Profitable Even Before Virus Outbreak
Fewer U.S. Firms in China Profitable Even Before Virus Outbreak
U.S. companies operating in China were having an increasingly tough time last year as slowing economic growth and trade tensions squeezed profits before the coronavirus outbreak added to their concerns,abusiness survey showed on March 10.
Overafifth of the 372 members of the American Chamber of Commerce who answered the survey sawadrop in revenue in 2019, compared with7percent in 2017.
Just over 60 percent described their operations as profitable, the lowest proportion in almost two decades, according to the survey, which was conducted last year.
Some 10 percent of respondents to an earlier February survey by the chamber said they were losing at least halfamillion yuan ($71,989)aday from the virus disruptions.
“Our member companies are in varying stages of resumption of productivity. So operations are mostly north of, say, 50 percent in capacity. Some are as high as 80 percent. This is somewhat anecdotal,” Gilligan toldanews conference on March 10.
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသော စီးပွားရေး အခြေအနေများ၊ ကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှုများကြောင့် အမြတ်အစါန်းရရှိမှု နည်းပါးနေသည့်အပြင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုများက အခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးရွားစေရာ တရုတ်နိုင်ငံရှိ အမေရိကန် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုနှစ်တွင် အခက်ပိုကြုံရနိုင်ကြောင်း စီးပွားရေး စစ်တမ်းတစ်ခုက ဆိုသည်။
အစိုပါ စစ်တမ်းကို ဖြေကြားခဲ့သော အမေရိကန် ကုန်သည်ကြီးများ အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်၃၇၂ ဦး၏ ပါးပုံတစ်ပုံက ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဝင်ငွေ ကျဆင်းမှုကို တွေ့မြင်ခဲ့ရကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်တော့ ၇ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိခဲ့သည်။
၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသော လုပ်ငန်းများကသာလျှင် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းက အမြတ်အစွန်းများ ရရှိနေ‌သည်ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဆယ်စုနှစ် နှစ်စုအတွင်း အနိမ့်ဆုံး ရာခိုင်နှုန်းလည်းဖြစ်သည်။
“Covid-19 ရောဂါပို တိုက်ဖျက်နေရခြင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်လက်ဆွေးနွေးမှုတွေ၊ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး နှေးကွေးလာတွေဟာ စီ။းပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် စိန်ခေါ်မှုရှိ‌တဲ့ အခြေအနေတွေပါပဲ” ဟု အမေရိကန် ကုန်သည်ကြီးများအသင်းဥက္ကဋ္ဌ Greg Gilligan က ပြောသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှာ ဇန်နဝါရီလအတွင်းတွင် ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်၏ အဆင့်တစ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အင်အားအကြီးဆုံးသော နိုင်ငံကြီး နှစ်ခုအကြားက တင်းမာမှု လျော့ကျလာခဲ့သည်။ သို့သော် စီးပွားရေးပြန်လည် ဦးမော့လာမည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်များက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် စုံးစုံးမြုပ်သွားခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဝူဟန်မြို့တွင် စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကူးစက်မှုသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုများ၊ စီးပွားရေးဆောင်ရွက်မှုများအတွက် များစွာ ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည်။
စစ်တမ်းတွင် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့သော လုပ်ငန်းများအနက် သုံးပုံတစ်ပုံမှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို အချိန် နောက်ဆုတ်ခြင်း၊ ‌ပမာဏလျှော့ချခြင်းများပြုလုပ်မည်ဟု ဆိုကြသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ စစ်တမ်းတွင် ဖြေဆိုခဲ့ကြသူများအနက် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကတော့၎င်းတို့မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် တစ်နေ့လျှင် ယွမ်တစ်သန်းခန့် အရှုံးပေါ်နေသည်ဟု ဆိုကြသည်။
“ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုရယ် ကဏ္ဍပေါင်းများစွာမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဒီတော့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေဟာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းရဲ့ အထက်မှာ တချို့ကတော့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာရှိတယ်။ ဒါဟာလည်း နည်းနည်း သက်သာရာရစေတာပေါ့” ဟု Gilliganက ပြောသည်။
SOURCEGabriel Crossley (Reuters)
Previous articleAsia Markets Look to Central Bank Action as Liquidity Tightens
Next articleU.S. Retailers Face $700 Million Hit as Virus Disrupts Ocean Shipping